ओली र देउवालाई अन्तिम मौका
सम्पादकीय ओली र देउवालाई अन्तिम मौका दुवै नेता आसेपासे पोस्न विधि र प्रक्रियामात्र हैन लोकलाजको पनि डर नमान्ने पात्रका रूपमा बदनाम छन्
बाह्रखरी - शनिबार, मंसिर २७, २०७७
समयले व्यक्तिलाई गल्ती सुधार गर्ने मौका बिरलै दिन्छ । यस्तो मौका राजनीतिक नेताहरूले त झनै कम पाउँछन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले भने यस्तो मौका पटक पटक पाए । ओली र देउवाले संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विगतको गल्ती र कमजोरी सच्याएर आफ्नो छविका लागेको दाग हटाउने एउटा मौका फेरि पाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि आइतवार बस्ने गरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । बैठक बस्नुभन्दा पहिले उनले प्रमुख विपक्षी नेता देउवासँग छलफलसमेत गरे । बैठक बस्नुपूर्व विपक्षी नेतासँग छलफल गर्दा सहमतिमा पुग्न सजिलो हुन्छ । तर, सहमति केका लागि भन्ने प्रश्न भने ओली र देउवा दुवैको नियतको कसी हो । * यसैबीच देउवा आइतवारको बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी दिइएकाे छ । तर, बैठकमा नगएर हैन निश्चित पारदर्शी विधि र प्रक्रिया अपनाइने सुनिश्चित गराउन सकेमात्र देउवाकाे अडानको अर्थ हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा दुवै आफ्ना कृपापात्रहरूलाई राज्यको ढुकुटी एवं स्रोत बाँड्न विधि, प्रक्रियामात्र हैन लोकलाजको समेत डर नमान्ने पात्रका रूपमा लाञ्छित छन् । अहिले पनि संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा आफ्ना भ्रष्ट र नालायक आसेपासे भर्न उनीहरूले सहमति गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । व्यक्तिको पात्रता र व्यावसायिक निष्ठाभन्दा आफूसँगको निकटताका आधारमा पारदर्शी विधि र प्रक्रियाविना व्यक्ति चयन गर्ने सहमति गरियो भने देशले त्यसको दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव भोग्नुपर्नेछ । उनीहरू स्वयं पनि इतिहासमा मौका पाउँदा समेत देशको भलो नगर्ने खलपात्रका रूपमा अझ बढी चिनिनेछन् । ओली र देउवा कुनै न कुनैरूपमा संलग्न निकट अतीतमा भएका संवैधानिक नियुक्तिहरूमा सहमतिका नाममा भएको भागबन्डामा उनीहरूका कृपापात्र प्रायः नालायक र भ्रष्टहरू नै छानिएको देखिएकाले अहिले पनि सन्देह गर्नुपरेको हो ।
हुनत, यसपटक पनि ओली र देउवाले आफ्ना आसेपासेको स्वार्थभन्दा राष्ट्रको हितलाई बढी महत्त्व देलान् भनेर अपेक्षा गर्नु मूर्खता ठानिन सक्छ । तर, उनीहरूको उमेर र परिस्थितिले गर्दा विगतमा गरेका गल्ती सुधारेर आफूमाथि लागेको दाग मेटाउने मौका अर्कोपटक आउने सम्भावना बिरलै हुनाले देशको हितमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने आशा पलाएको हो । ओलीले त यसै पनि अर्को निर्वाचनपछि आफू प्रधानमन्त्री नहुने घोषणा गरिसकेकै छन् । देउवाका लागि पनि कुनै अनहोनी नभए ज्योतिषीको भविष्यवाणीबाहेक अर्कोपटक प्रधानमन्त्री हुने अरू आधार देखिँदैन । यसैले इतिहासमा देशका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त पारेर छाडेको कलंक नबोक्ने हो भने उनीहरूका लागि यो अन्तिम मौका हो । संवैधानिक पदहरूमा योग्य, इमानदार र चरित्रवान् व्यक्ति छनोट गर्न निश्चित विधि एवं प्रक्रिया पारदर्शीरूपमा अपनाइने परम्परा बसाउन ओली तथा देउवा दुवै जना प्रवृत्त हुनुपर्छ । नियुक्त व्यक्तिहरूको नाम पढेर जनताले वाह ! क्याबात ! भन्ने मौका पाए भने ओली र देउवालाई यसअघि राज्यको ढुकुटी आसेपासेलाई पोसेको पाप र बदनाम मेटाउन सहयोग पुग्नेछ । ओली र देउवाले आफ्नो छविमा लागेको दाग मेटाउने अन्तिम मौका सदुपयोग गर्ने आशा गर्नु मूर्खता त नठहरिएला नि !
शनिबार, मंसिर २७, २०७७ मा प्रकाशित